Reer Isaaq oo ugu Yeedhay Jwxo-shiil Amiir!!! – Rasaasa News
Reer Isaaq oo ugu Yeedhay Jwxo-shiil Amiir!!!
Jul 28, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilo
Nin aduun ku noolow maxaa aragti kuu laaban,nin reer baadiye ah ayaa waa isaga oo riti dhaan ah oo ay saaran yihiin lix haamood, haan haamihii ka mid ah ayaa biyihii daadisay kolkaasu nigixii dhawr goor u giijiyey oo uu guf gufeeyey, markaasuu arkay haan kale oo iyana biyaha in ay biyaha daadiso intuu cadhooday oo uu jabiyey haantii biyaha daadinaysay ayuu waliba yidhi “ma haan haantaas arkaysa ayaa biyo celin”.
Dad aad u badan ayaa waxaa ay si cad uga soo horjeedsadeen Jabhada wadaniga Xoreynta Ogadeeniya [Jwxo] tan iyo intii uu Jwxo-shiil arinta qabyaalad ka dhigay. Dadku isku mid ma aha waxaa jira dad iyagu markii ugu horesayba fahmay sida uu wax u wado Jwxo-shiil oo ka soo horjeedasaday, waxaa raacay waa dhaxaadkii dad iyaguna bilaabay wax uu Jwxo-shiil ku dhaqmo.
Ka soo horjeedsiga Jwxo ma aha in la neceb yahay in loo dagaalamo xuquuqda ay lee yihiin dadweynaha dega dhulka Somalida Ogadeeniya, waxaa la neceb yahay sida xun ee uu ugu tagri falayo qadyada Somalida Ogadeeniya iyo qabyaalada qoysnimo ee uu galiyey Jwxo-shiil qadyada Ogadeeniya.
Hadaad u fiirsato, dadka maamulka sida khaldan ku soo galay ee ugu awooda badnaa Jwxo waxaa ugu horeeyey Bashiirl Axmed Makhtal Daahir, Maxamed Macalin oo Afada ay Jwxo-shiil walaalo yihiin iyo Yuusuf Cadami oo u qaabilsanaa dhinaca abaabulka. Bashiir Axmed Maxkhtal, waxaa uu ahaa ninkii sababay in ay Xabashi isu dhiibaan qaar ka mid ah Madaxdii Jwxo kolkii ay ka yaabeen in lafahooda loo dilo. Bashiir waxaa uu masuul ka ahaa dhinaca dhaqaalaha iyo ciidanka, waxaana uu ahaa bariyihii dambe ninka ugu soo hub galin badnaa dalka Somaliya. Waxaa la sheegay in galitaankii ay Itobiya gashay Muqdisho in uu kolkaas ka iibiyey hub ay Jwxo lahayd Ciidamadii Maxaakiimta Islaamka, waxaan uu ka helay lacag dhan $1,500,000 USA. Wiilal Jwxo ah oo dhaawac ah oo kolkaas yaalir ay Isbitaal ku yaal muqdhisho, ayaa kolkuu ogaaday in ay Itobiya soo galayso, waxaa uu ku yidhi Itobiya ayaa imanaysa waxaanan idiin keeni gaadhi idin geeya xadka Kenya. Bashiir Makhtal ma uusan siinin wiilashii dhaawaca ahaa hal shilin oo ay cunto ku iibsadaan, kuman soo noqonin Ideecada BBc-da ayey ka maqleen waa laqabtay oo lacag xoog leh ayaa lagu qabtay. Wiilashii iyaga oo curyaamiin ah ayey hada waxaa joogaan Xerada Qaxootiga ee Xagar-dheere.
Dhinaca Jaaliyadaha dibada waxaa u qaabilsanaa Maxamed Macalin [Seedi] oo ay caawinayso walaashiis, waxaana la sameeyey silsilad qabiili ah oo xoog badan oo aan lahayn meel laga soo dhex galo iyo cid talo ku darsan karta doona. Dhalinaro aad u yar yar iyo haween aan waxba fahamsanayn oo aan waligood Ogadeeniya arag oo aan ka warhayninba meel loo socdo. Waxaa Maalin la waydiiyey in haatan ah dadka wali la socda Jwxo-shiil, war sidani si ma ah ee maxaa loo raaci waayey sharciga Jabhadnimo ninkaasi wuxuu yidhi “wixii dad keena umaabunu raaci Maadey”, taas macnaheedu waa ruuxi shir qabta ee ii yeedhaba waan raaci.
Dhinaca Xuquuqda Ogadeeniya, waxaa uu magacowday Jwxo-shiil laba ruux oo reerkiisa ah oo isaga hooseeya Fausiya iyo Sulub, ma jiraan wax kale oo la shaqeeya ama ay wax ka dhagaystaan, waxay qoraan oo kaliya cida ay u maleeyaan in ay isku reer yihiin, dadka kale oo dalka degan ma jiraan wax xitaa liistayna ah oo ay u sameeyaan. Waxaana arintaas daliil idiinku filan bal waxaad dhawrtaan qoraalka ugu dambeeyey ee ay soo saareen, dadkaas ay magac dhabeen kaliya ayey Itobiya xidhay, waxaa jiraan aad u da,a Weyn oo ah rug cadaa Siyaasiya oo aan ilaa iyo maan ta la garanaynin waxa ay Itobiya u haysato xitaa Qabiil ku shaqaytayaalku way u quudhi waayeen in ay Qoran MAHDI AYUUB, oo ah ninka ugu caansan ee ugu xadhig dheer dadka Somalida ah ee u xidh xidhan Itobiya.
Waxaan si,aan la fahmaynin Jwxo-shiilo oo aan waliba wanaasanayn u daba socda “kuwa haday kufaana kugu Ooyi, hadii aad kuftidna kugu qosli” oo maxay yihiin kuwaasi, waa qar uu Jwxo-shiil maskaxda ka xaday oo dhibaatada ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya ku hayaanba moodaya in ay iyaga libin u tahay. Waxayna u badan yihiin beelo yar yar oo iyagu kuba ciil baxa, xanuunka beelaha ay wada dhasheen ku dhaca, waana beelaha loo yaqaan [Cabdile Illey], oo iagau baryahan daba-galis u ah beesha reer isaaq oo iska dhigta in ay tahay beel horseed ka ah xoraynta Ogadeeniya.
Dadkii hore u ogaaday been beenta ay ku jiraan Jwxo-shiilo iyo kuwii ku xigayba garasho ayaa gaadhsiisay in ayna Jwxo-shiil Jabhad ahayn, ee waxa kaliya ee ay doonayeen uu ahaa in ay dadka kale isku dheereeyaan. Bal dhawra maanta wax ay ku qoreen Bogga Hanqadh ee uu wax ku qoro ninka Wakiilka uga ah dalkan Ingriiska Xawaalada KAAH ee magaciisa la yidhaadho Maxamed Dheeg, halmaan hadal kuma jirowaxaan u jeednaa wakiilka Jwxo-shiil ee Norway oo ay isku jilib yihiin wiilka aan ku khaldanay Maxamed Dheeg Caagane ” Amiirkii Ogadeenka oo dhambaal ka soo Diray Guna Gado“.
rasaas baa runta sheegee rafiiqaaga ka yeelo oo ra,ayigaaga u dhiibo.
Dambiile Jwxo-shiil Ayey Warar Sheegayaan in uu Xijaabtay Badhtamihii Bishii February 2009